Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Isniin Ah Ay Warbaahintu Qoreen Iyo Xogaha Cusub Ee Xiisaha Leh - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaWararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Isniin Ah Ay Warbaahintu Qoreen Iyo Xogaha Cusub Ee Xiisaha Leh
Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Isniin Ah Ay Warbaahintu Qoreen Iyo Xogaha Cusub Ee Xiisaha Leh
April 5, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 1
Wargeysyada ciyaaraha ayaa si joogto ah usoo bandhiga xogta, xanta iyo dhaqdhaqaaqa suuqa, waxaananu idiinka soo xulnay qodobbadii ugu waaweynaa ee ay qoreen maanta oo Isniin ah:
Xiddiga reer Brazil ee Neymar oo 29 jir ah ayaa heshiis hordhac ah ay isla gaadheen kooxdiisa, kaas oo Par des Princes kusii haynaya illaa sannadka 2026, laakiin kooxda ayaa hadda qaadaysa tallaabada labaad oo ah in ay sidan oo kale u qanciso Kylian Mbappe oo ay heshiis waqti dheer ah ka saxeexdo. (Telefoot)
Weeraryahanka Borussia Dortmund ee Erling Haaland ayay kooxaha doonayaa ku qasban yihiin in ay bixiyaan 40 milyan oo Euro oo ay dillaal ahaan doonayaan Mino Raiola iyo aabaha dhalay laacibkan ee Alf-Inge, kuwaas oo mid walba uu qaadanayo 20 milyan oo Euro. (RAC1)
Haaland waxa qandaraaskiisa lagu burburin karaa 75 milyan oo Euro sannadka dambe, laakiin wuxuu ka tegi doonaa xagaagan haddii Dortmund ay usoo bixi weydo tartanka Champions League xilli ciyaareedka dambe. (Sun)
Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa sheegay, in go’aanka ugu dambeeya ee haddii Haaland uu imanayo kooxda, uu iska leeyahay madaxweyna Joan Laporta. (AS)
Lionel Messi ayaa sugaya in uu arko mashruuca Laporta ee Barcelona ka hor inta aanu go’aan ka gaadhin mustaqbalkiisa oo noqon doona in uu tago PSG ama Barcelona iyo in uu doorto mid kale oo ah inuu sii joogo. (Mundo Deportivo)
Angel di Maria ayaa sheegay in uu jeclaan lahaa inay PSG u wada ciyaaraan Lionel Messi, haddii uu go’aansado inuu ka tago Barcelona. (beIN Sports)
Tababaraha Leicester City ee Brendan Rodgers ayaa rajaynaya in uu lasoo saxeexan doono kubbad-sameeyaha reer Scotland ee Callum McGregor oo ah 27 jir u ciyaara Celtic. (Sun)
Manchester United iyo Juventus ayaa xiise u muujinaya weeraryahanka Barcelona iyo xulka qaranka France ee Ousmane Dembele oo 23 jir ah, laakiin Liverpool iyo PSG ayaa iyaguna ku jira loollanka. (Mundo Deportivo)
Garabka Real Madrid ee Lucas Vazquez oo qandaraaskiisu ku eg yahay dhamaadka xilli ciyaareedkan ayaa dalabyo ka helay kooxaha Manchester United, Chelsea, AC Milan iyo Bayern Munich. (ABC)
Juventus ayaa la sheegay in aanay bixin doonin 10 milyan oo Euro oo dheeraad ah oo ay ka doonayso Atletico Madrid, kuwaas oo ah in ay heshiiska amaahda ee Alvaro Morata ku kordhisato sannad kale. (AS)
Difaaca Everton iyo xulka Colombia ee Yerry Mina oo 26 jir ah, waxa uu doonayaa in uu tago horyaalka Talyaaniga, iyadoo lala xidhiidhinayo Inter Milan iyo Fiorentina. (Sun)
Tababaraha Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay in weeraryahanka reer Argentina ee Sergio Aguero oo 32 jir ah, aanu iman doonin Old Trafford, xilli laacibkaasi uu si bilaash ah kaga tegayo Manchester City. (Goal)
Saddex kooxood oo Premier League ah iyo PSG ayaa kula tartami doonta Arsenal xiddiga ay amaahda ku haysato ee Martin Odegaard. 22 jirkan reer Norway oo 13 ciyaarood u saftay Arsenal ayay doonaysaa in ay heshiiskiisa amaahda u beddesho rasmi laakiin tartan ayaa lagula jiraa. (90min)
Sallah mohamed says:
Neymar wuxu qaaday tilaabo looga bahan yahay PSG taasoo ah inuu laacibka garabka kubaddaha ka waala difaacyadaha kooxaha yar yar io ku waaweyn uu heshiis hor dhac ah la gaadho naadiga uu hada ka tirsan yahay waxayna guul u thy tababaraha hada kooxda leyliya mario bochatino